Umhla My Pet » 5 Iindlela ukuba Yiba Tech Amahlwempu
Phambi imihla ID fown, ngefowuni kunye nokusebenzisa loluntu ulalele ukuba umntu afike ukucofa mfo ukuba (okanye wentombazana) inani ngokuphindaphindiweyo de iminwe yakho yaba sidinwe ngokucinezela amaqhosha. Kunye yimimangaliso mihla iteknoloji lokuvakalisa kwinto yonke wakho, ukubona igama kunye nenombolo yakho gqi esiseleni ezine ukuya, izihlandlo ezihlanu okanye ngaphezulu imini turn iyonke off. Oku uya iitekisi, emails nemiyalezo eendaba zentlalo. Akukho nto kusenokwenzeka ukuba @JohnDoe ufuna ukufunda ngamayeyeye yakho Tweets kuye ngeyure ngeyure nganye okanye ukufumana umbhalo emva umbhalo bezibuza apho kwaye into oyenzayo. Oku liyafana uzobe olwenziwe ekumlandeleni ngeenxa, rhoqo ayokufikelela kwigxalaba.
Ukuba kuxhomekekwe sakho kwiqabane lakho ephuma ngokuba kuxhomekekwe iteknoloji, wayityatya woyinamathelisa kwaye ugqithele umsebenzi ukuba alubandakanyi ngefowuni, tweeting, imiyalezo okanye ngenye ezamkelekiyo ekumlandeleni.
Betha gym. Njengoko amaqhuma ombhoxo ukuba phezulu kwaye phantsi, ukukwazi kwakho ukucofa okanye umbhalo uya kusuka obalaseleyo ukuba ungakhathali. ngaphandle kokuba uceba kwi imiyalezo into ephuma ezifana, "UHu t w? Wgats phezulu "wena kusenokwenzeka ukuba ngunonca uzame ukwenza zoqhagamshelwano ngexesha elithe yakho. Njengoko bonus wongezelela obonisa kunokukunceda ukuba bakhululeke yaye de-uxinezeleko, ukwenza imfuneko kuba amahlwempu aye longele. Ukuba akunayo sobulungu gym, musa ukubaleka ndizifunele enye nje ukuba kude ukuziphatha kwakho ihlwempu. Thatha inja yakho kuphuma sibethwe, kuba ubaleka ngeenxa ubumelwane bakho okanye ukubetha ezityhutyhayo ibhayisekile ezisePark yakho yengingqi. Into engundoqo ukukhumbula: Shiya iseli wakho ekhaya okanye elitshixiweyo yakho ejimini. Ukuba awunayo na, awukwazi ukuyisebenzisa.
Biza omnye umntu. Biza omnye wabahlobo bakho ingubo njenge labafowuni elikhethiweyo. Xa uyeva ukwenza ifowuni yesibini okanye umbhalo lwesithathu, ungakwazi uthabathe ifowuni yakho - logama nje umntu kwelinye isiphelo asiyi mfo yakho okanye intombazana. Makhe umhlobo wakho athethe nawe phantsi, ngokunikhumbuza ukuba Baninzi abantu ebomini bakho ukuze ukuba inkampani.
Yenza micingeni na imo. Ukuba ngaba kwenzeke ukukhangela page yakhe Facebook ezimbalwa izihlandlo ezininzi kakhulu, amathuba okuba yena soze ukwazi ngaphandle kokuba wenze kucace. Ukuba uthembe kuye ngokwenene, akukho sizathu khangela phezulu kuye 20 amaxesha ngemini. Emveni kwakho konke, nguye mhlawumbi smart kakhulu post pics yena enye intombazana xa esazi ukuba ukuba ndiyibone. Ukuba ukuba smart, yini na ukuba naye kakade? Ukuba ayenzeki ukubamba enye tshuphe ezininzi yephepha wakhe eendaba zentlalo, musa rhoqo ngeposi izimvo. yena, kunye nabahlobo bakhe, Akunyanzelekanga ukuba sazi ukuba sele kwiphepha yonke imizuzu emihlanu.
Yiya kwi sabatha cell. Ukuba uqala ukuvumela enyakanyakeni woyinamathelisa phezulu kuwe, ubeke cell yakho lokuphumla ngemini. Nangona oku kubonakala ngathi yinto engenakwenzeka, uhlanga lwabantu abazange baqhubeke elide phambi iifowuni wakha weza kuba. Jika ifowuni yakho, uzibeke idrowa enze izicwangciso kunye nabahlobo kunye nentsapho imini yonke.
Betha kwidolophu. Cwangcisa ingokuhlwa kunye nabahlobo. Ngoxa uxakekile lokutyela, ukudanisa okanye ubukele sanctus blockbuster zakutshanje, akuyi kuba ucofa uthando lwakho okanye ndibhalela kuye iindledlana. Ukuba ngaba uzifumanisa ayokufikelela kwi ifowuni yakho, engafuni ukuba kwisicatshulwa ngokukhawuleza xa abahlobo bakho bajonge enye indlela, ziphose emva langoku.